संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै डा. केसी सडकमा - Everest Dainik - News from Nepal
संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै डा. केसी सडकमा
काठमाडौंः संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन तथा सरकारको स्वेच्छाचारी कदम विरोधमा अहिंसात्मक नागरिक प्रदर्शनमा डा. केसी सहभागी भएका हुन् । प्रदर्शनमा डा. गोविन्द केसी ‘प्रतिनिधिसभा मार्न पाइँदैन, निरंकुश सरकार चाहिँदैन’ भन्ने प्लेकार्ड सहित सहभागी भएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर, जुनसुकै बेला अचेत हुन सक्ने
केसीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली ‘श्री ७’ महाराजको जस्तो भएको बताए । उनले राजालाई फाल्ने जनताले ओलीलाई पनि फाल्ने बताए । संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा रहेको र त्यहाँबाट ओलीको कदमलाई रोक्ने आश रहेको डा. केसीले बताए ।
याे पनि पढ्नुस डा. गोविन्द केसीलाई जबर्जस्ती उठाएर अस्पताल लगियाे, उपचार नगर्ने केसीका हठ
सहभागीहरुले ‘प्रतिनिधि सभा मार्न पाइँदैन, निरंकुश सरकार चाहिँदैन’, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, संविधानविरुद्धको षडयन्त्र बन्द गर’, ‘न्यायिक सुशासन कायम गर, संविधानवादको रक्षा गर’, ‘संवैधानिक निकायको कब्जा बन्द गर, असंवैधानिक नियुक्ति सिफारिस खारेज गर’, ‘नागरिक अघि बढ्दैछ, सर्वसत्तावाद ढल्दैछ’ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस डा.केसीको मोदीलाई चिठीः भारत र नेपाल मिलेर लड्नुपर्ने लडाइँ धेरै छन् (पूर्णपाठसहित)
ट्याग्स: डा. गोविन्द केसी, संसद् पुनर्स्थापना